EcoDry ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်သောကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ China Laboratory glassware အဝတ်လျှော် Xipingzhe
ပုံစံ - Aurora-2
■Double level, ဆေးထိုးနှင့်မဆေးထိုးဖို့ fit
သံသရာနှုန်း pipettes [အရေအတွက်] 238
■အရင်းအမြစ် -variable မြန်နှုန်းအပူပေးစက်စုပ်စက်၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှု
■စောင့်ကြည့်ခြင်းမှတဆင့်လုံခြုံမှု - ဖိအားနှင့်ဆေးမှုတ်ဆေးကြောစစ်ဆေးခြင်း
■အဆင်ပြေသောခြောက်သွေ့မှုပံ့ပိုးမှု - EcoDry
အလိုအလျောက် ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware အဝတ်လျှော်
စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အခြားဆက်စပ်သည့်နယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသောအ ၀ တ်လျှော်စက်၊ ဖန်ထည်များကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ Erlenmeyer ဘူးများ၊ ဘူးများ၊ ထုထည်ဘူးများ၊
၁။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်ကိုယူနိုင်သည်။ ယူနီဖောင်းသန့်ရှင်းရေးရလာဒ်များကိုသေချာစေရန်၊
၃။ လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် ၀ န်ထမ်းများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပါ။
သန့်ရှင်းခြင်း၊ ပိုးသန့်ဆေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြီးစီးခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်အားကိုလျှော့ချခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ - တံခါးကိုအလိုအလျောက်တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းနည်းပညာ
တံခါးသည်နေရာတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါအဝတ်လျှော်သည်ဖောက်သည်၏နောက်ဆုံးအယူအဆကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ manual push မပါဘဲ positioning buckle နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက်တံခါး၏သော့ခလောက်သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည်။
အလိုအလျောက်တံခါးဖွင့်ခြင်း - သန့်ရှင်းရေးပြီးစီးသွားသောအခါတံခါးနေရာချထားသောကန့်သည်အလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးပြီးတံခါးကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့တွန်းပို့သည်။ တံခါးဖွင့်ပြီးနောက် positioning buckle သည်အလိုအလျောက်ပြန်သွားသည်။ ၎င်းသည်အသုံးအဆောင်များကိုအအေးပေးပြီးသန့်ရှင်းပြီးနောက်အလိုအလျောက်ခြောက်သွားစေသည်။
2: manual ပိတ်ထက်ပိုမိုစံ
၁။ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောစုပ်စက်ကိုတင်သွင်းပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဖိအားသည်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
3. ရေမှုန်ရေမွှား၏ 360 ဖြစ်ဖို့သေချာစေရန်ပြားချပ်ချပ် - ပါးစပ် nozzle ၏ rotary မှုန်ရေမွှားလက်မောင်း၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း° အသေထောင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိဘဲ;
၄။ သင်္ဘော၏အတွင်းပိုင်းနံရံသည် ၃၆၀ ဖြစ်ရန်သေချာစေရန်ကော်လံ၏ဘေးကိုသွယ်လျစွာဆေးကြောပါ° သန့်ရှင်း
5. အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအရွယ်အစားများကိုထိရောက်စွာသန့်ရှင်းရေးသေချာစေရန်အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သော bracket၊
1.Wash Start delay function: ၀ ယ်သူ၏လုပ်ငန်းထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကိရိယာတွင်ရက်ချိန်းအချိန်ကိုစတင်သည်၊
၂။ OLED module အရောင်ပြသခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်အလင်းပေးခြင်း၊ မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက်၊ ကြည့်ရှုနိုင်မှုရှုထောင့်မှအကန့်အသတ်မရှိ
၆။ ဒေတာများကိုအလိုအလျောက်သိုလှောင်ခြင်းသန့်ရှင်းခြင်း (optional)၊
အလိုအလျောက်ဖန်ထည်အဝတ်လျှော် - နိယာမ
ရေကိုအပူပေးခြင်း၊ ဆပ်ပြာထည့်ခြင်းနှင့်ရေယာဉ်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုဆေးကြောရန်အတွက်ပရိုဂျက်တာခြင်းတောင်းပိုက်ထဲသို့မောင်းရန်လည်ပတ်စုပ်စက်ကိုသုံးပါ။ သင်္ဘော၏အထက်နှင့်အောက်မျက်နှာပြင်များကိုသန့်ရှင်းနိုင်သည့်ကိရိယာနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာတွင်အနိမ့်နှင့်အနိမ့်မှုန်ရေမွှားလက်နက်များလည်းရှိသည်။
အခြေခံဒေတာ Function Parameter
မော်ဒယ် Aurora-2 မော်ဒယ် Aurora-2
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 220V / 380V ITL အလိုအလျောက်တံခါး ဟုတ်တယ်
ပစ္စည်း အတွင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း 316L / Shell က 304 ICA Module ဟုတ်တယ်
စုစုပေါင်းပါဝါ 5KW / 10KW Peristaltic pump 2
အပူပါဝါ 4KW / 9KW ငွေ့ရည်ဖွဲ့ယူနစ် ဟုတ်တယ်
ခြောက်သွေ့စွမ်းအင် N / A စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ် ဟုတ်တယ်
အဝတ်လျှော် Temp ။ 50-93℃ OLED မျက်နှာပြင် ဟုတ်တယ်
အဝတ်လျှော်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအသံအတိုးအကျယ် 198L RS232 ပုံနှိပ်ခြင်း interface ကို ဟုတ်တယ်
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 35 စီးကူးမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း optional ကို
သန့်ရှင်းရေး၏အလွှာနံပါတ်2（Petri ပန်းကန် ၃ လွှာ） အရာများ၏အင်တာနက် optional ကို
ရေချိုးဆေးနှုန်း 0-600L / min အတိုင်းအတာ(H ကို * W *: D)မီလီမီတာ 995×617×765mm
အလေးချိန် ၁၃၅ ကီလိုဂရမ် အတွင်းအခေါင်းပေါက် (H * W * D) မီလီမီတာ 660 * 540 * 550 မီလီမီတာ
နောက်တစ်ခု: အထက်အဆင့်တောင်းခြင်းတောင်းဘောင်ထည့်သွင်းထိုးသွင်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသော FA-Z01
ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware အဝတ်လျှော်
ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်ထည်အ ၀ တ်လျှော်
ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware အဝတ်လျှော် Disinfector
ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware ခြောက်သွေ့နှင့်အတူအဝတ်လျှော် Disinfector
ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware အဝတ်လျှော်စက်
ဓာတ်ခွဲခန်းအဝတ်လျှော် Disinfector ခြောက်သွေ့
အရည်များထုတ်ပေးသည့်အရည်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအ ၀ တ်လျှော်စက် ...